Firotsahan-kofidina: tsy handray izay antontan-taratasy tsy ampy ny HCC | NewsMada
“Misy folo mahery ireo taratasy ilaina, araka ny voalazan’ny lalàna vaovao mifehy ny fifidianana. Rehefa tena tonga ny fifidianana, raha sanatria tsy ampy iray fotsiny izay: tsy azo raisina ny firotsahan-kofidina.”
“Na izany aza, ny ankamaroan’ny taratasy takina amin’ny kandidà: mitovy amin’ny teo aloha ihany”, hoy izy.Maro ireo taratasy takina, ary efa fantatra ny fanombohana ny fametrahana izany. Dieny izao, efa tokony hanomboka hanangona izany ireo te ho kandidà.
Mba tsy atao ny “ady gasy”
“Aza atao ny “ady gasy” amin’ny andro na ora farany ny fametrahana ny antontan-taratasy, sao sanatria misy olana ny taratasy”, hoy ihany ny fanazavany. Raha misy olana izany, mbola azo amboarina raha alohan’ny fotoana: afa-miteny ny HCC ny amin’izany. Rehefa tonga kosa ny fikatonan’ny fandraisan’ny HCC ny antontan-taratasy, tsy afa-manova na inona na inona intsony izy amin’izany.